१ 15 मिनेट भन्दा कम - Thermomix रेसिपीहरू थर्मोराइकिप्स (पृष्ठ २)
तपाईं Thermomix® मा नयाँ हुनुहुन्छ र कहाँबाट सुरु गर्ने थाहा छैन? हामी यो क्रीम फ्लान जस्तै एक सजिलो नुस्खा प्रस्ताव।
करी, पीच र नरिवल सूप संग स्मोक्ड सामन
स्मोक्ड साल्मनको उत्कृष्ट क्यूबहरू करी सूप, पीच र नरिवलको दूधको साथ सेवा गरिन्छ। एक विदेशी र नाजुक पकवान।
के तपाइँ छिटो र सजिलो मिठाईहरू मनपर्छ? यो दही फ्लान कोसिस गर्नुहोस्, तपाईं यसको चिकनी स्वाद र सादगी संग प्रेममा पर्नुहुनेछ।
माछाको लागि क्रीमयुक्त क्रीम र डिल सस
माछाको साथमा क्रीमयुक्त क्रीम र डिल सस र तपाईले यसलाई 8 मिनेटमा तयार पार्नुहुनेछ। स्वादिष्ट!
हनी मस्टर्ड ड्रेसिङको साथ मूली र फेटा सलाद
मूली र फेटा चीज सलाद, भुटेको बदामको साथ, स्वादिष्ट मह र तोरीको ड्रेसिंगले सजाइएको।
यो मसँग भएको सब भन्दा धनी पेस्ट्री क्रीम नुस्खा हो। यसको स्वाद र बनावट कुनै पनि जन्मदिनको केक भर्नको लागि उत्तम छन्।
महाद्वीपीय नाश्ता को एक क्लासिक! उमालेको अण्डा। मलाईदार, रसदार र स्वादिष्ट भित्र।
तातो दिउँसो लडाई गर्न को लागी राम्रो कुरा? यो चकलेट हिला स्वादिष्ट र २ मिनेटमा तयार छ।
बगैंचा टमाटर सलाद अदरक र पुदीना ड्रेसिंग संग
अदरक र पुदीना ड्रेसिंग संग यो गार्डन टमाटर सलाद आश्चर्यजनक छ, यो ताजा, स्वादिष्ट, स्वादपूर्ण, र तीव्र छ।
एक विधि खोज्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईं घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ र उपहारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? हामी यी हेजलन चकलेटहरू प्रस्ताव गर्दछौं। धनी र धेरै सजिलो।
ह्याम, तोरी र पेस्टो टोस्ट
यी ह्याम, zucchini र pesto toasts को रूप मा उनीहरु मूल रूप मा सजिलो छ। एक aperitif भूमध्य आहार को सबै स्वाद संग।
के तपाइँ तपाइँको सब्जी वा माछा बर्तन संग एक चटनी चाहिन्छ? अचार र केपर्स संग यो टार्टर चटनी को प्रयास गर्नुहोस्।
लसुन झींगा बनाउन तपाईंले राम्रो गुणको सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सबै गर्मी राख्नको लागि माटोको भाँडामा तिनीहरूलाई सर्व्ह गर्नुहोस्।
१० मिनेट भन्दा कम मा डिनर? हो, तपाइँको Thermomix® संग तपाइँ यो शाकाहारी कातालान पालक नुस्खा तयार गर्न सक्नुहुन्छ।
खरबूजा, पराग्वेयन र नेक्रेटिन स्मूदी
तरबूज, प्याराग्वेन र नेक्रेटिनले बनेको स्वादिष्ट र स्फूर्तिदायी स्मूदी, हाम्रो शरीरमा फलफूलको राम्रो मात्रा ल्याउन उत्तम छ।
द्रुत पिकन आइसक्रीम
के तपाइँ एक छिटो पेकन आइसक्रीम बनाउन चाहानुहुन्छ? हामी केवल3अवयवहरु र3मिनेट मा तयार संग एक महान नुस्खा प्रस्ताव।
के तपाइँ घर पुग्दा पहिलो पाठ्यक्रम तयार गर्न चाहनुहुन्छ? हामी सुझाव एक सजीलो सजीलो र ajoblanco रूपमा छिटो सिफारिस गर्दछौं।
चिसो गर्मी खाजाको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ? हामी तपाईंलाई यो अनानास स्मूदी प्रस्ताव गर्दछौं। फल र डेअरीको साथ एक सजिलो र द्रुत विधि।
किवी र झींगा सलाद
के तपाई स्वस्थ जीवन जीउन चाहानुहुन्छ र स्वस्थ व्यंजनहरू चाहिन्छ? यो किवी र झींगा सलाद प्रयोग गर्नुहोस्, यसको स्वादले तपाईंलाई विश्वस्त पार्दछ।
चिसो काकडी र दही सूप
के तपाईंलाई द्रुत, स्वस्थ र स्फूर्तिदायी सल्लाह चाहिन्छ? हामी तपाइँलाई चिसो काकडी र दही सुप prepare मिनेटमा कसरी तयार गर्ने भनेर देखाउँदछौं।
आधारभूत नुस्खा: लसुन माखन
लसुनको माखन बनाउनको लागि धेरै सरल छ र तपाईं यसलाई मासु, माछा, तरकारी र पास्तामा आफ्नो व्यक्तिगत स्पर्श दिन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
हनी लेमन ड्रेसिंगको साथ एभोकैडो सलाद
गर्मीमा र table्गको साथ तपाईंको तालिकामा सजावट गर्न मह र निम्बूको पोशाकसहित अवोकाडो सलाद, निस्सन्देह सरल र स्वादिष्ट।
यो आइसोटोनिक पेय पिई आराम गर्नुहोस् जसले खेल शक्ति सत्र वा गतिविधिको पूरा दिन पछि तपाइँको उर्जालाई नविकरण गर्दछ।
बोक्रा चीज टोस्ट र पेस्टोको साथ टमाटर
यी खसी पनीर टोस्टहरू र पेस्टो टमाटरको साथ तपाईं एक एपीरिटिफ वा छिटो र रमाईलो खाना बनाउन सक्नुहुन्छ।
कालो बेर र सुन्तला स्मूदी
स्वादिष्ट कालो बेर र गाजर स्मूदी, भिटामिन र ऊर्जाको अविश्वसनीय स्रोत यस गर्मीमा आफूलाई स्फूर्ति प्रदान गर्ने।
तरबूज र केरा स्मूदी
सुपर रीफ्रेसिंग तरबूज र केरा स्मूदी। यो धेरै सजिलो, सरल छ र यो गर्मी को लागी उपयुक्त हुनेछ।
यो दही केक जत्तिकै सरल छ किनकि धनी र ताजा छ। साथै Thermomix® को साथ यो केही मिनेटमा तयार हुनेछ।
आधारभूत नुस्खा: माखन maître d'hôtel
माटर डि'खेल बटर फ्रान्सेली खानाको एक आधारभूत विधि हो जुन तपाईं तरकारी, मासु र माछालाई विशेष स्पर्श दिन सक्नुहुन्छ।
ग्रेपफ्रूट र रोजमेरी सोडा
अंगूर र रोजमेरी सोडा तपाइँको मनपर्ने ग्रीष्म पेय हुनेछ। १ मिनेट भन्दा कममा तयार छ र एक स्वादको साथ जुन तपाईंको तिर्खा मेट्छ।
खरबूजा gazpacho क्लासिक gazpacho को एक संस्करण हो। गर्मी मा एक आवश्यक नुस्खा। चरण-देखि-चरण रेसिपी ताकि तपाईंसँग १० छ।
ताजा तर गजापाचो पोषण दिन र सबैभन्दा ताजा दिनहरूमा आफैलाई स्फूर्ति दिन एक उत्तम विकल्प हो। सरल र यती चाँडो कि यो अल्छी छैन।
तरबूज र सुन्तला ककटेल
के तपाईलाई पार्टीको लागि एक विदेशी पेय चाहिन्छ? यो खरबूजा र सुन्तला ककटेल प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। १ मिनेटमा तपाईंको Thermomix® को साथ यो तयार हुनेछ।
यस चिसो काकडी र दही सुप क्रन्ची मोडमा छिटो छिटो छ यो प्रकाशको रूपमा। गर्मी मा Thermomix® को साथ आफैको हेरचाह गर्न आदर्श।
यस गर्मी को सांग्रिया को तयारी एक निश्चित हिट हो। यति छिटो बनाउन, यती धनी र यती स्फूर्तिदायी कि त्यहाँ केहि पनि बाँकी रहनेछैन।
शैम्पेनको साथ स्ट्रबेरी शर्बत
के तपाईंसँग स्थिर स्ट्रबेरी छ? अगाडि बढ्नुहोस् र शैम्पेनको साथ यस स्ट्रबेरी शर्बत तैयार गर्नुहोस्। यो minutes मिनेटमा तयार हुनेछ।
अगाडि बढ्नुहोस् र यो बेरी शर्बत तयार गर्नुहोस्। यो स्वस्थ, प्राकृतिक, स्फूर्तिदायी र फलको बारेमा सबै राम्रा चीजहरू छन्।
यस तरबूज शर्बतले स्फूर्ति प्रदान गर्नुका साथै तपाईलाई क्यालोरी नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ गर्मीको आनन्द उठाउनको आनन्द बिना नै।
गुलाबी अनानास र बीट स्मूथी
Thermomix® को साथ यो गुलाबी अनानास र बीट स्मूदी तयार गर्नु धेरै सजिलो छ। २ मिनेटमा तपाईंसँग भिटामिन र खनिजहरूले भरिएको पेय हुनेछ।
के तपाईंसँग स्थिर फल छ र यसलाई आउटलेट दिन चाहनुहुन्छ? हामी तपाईंलाई कसरी एक स्वादिष्ट मन्डारिन शर्बत वा अन्य कुनै फलफूलका बारे जानकारी दिन्छौं।
के तपाईं आफ्ना साथीहरूसँग केही समयको लागि आराम गर्न चाहनुहुन्छ? गर्मीको सबै भन्दा राम्रा क्षणहरू सम्झनको लागि मोजिटो शर्बत बनाउनुहोस्।
आम र क्रनबेरीको साथ एभोकैडो डुबकी
आम र क्रनबेरीको साथ एभोकैडोको शानदार र आश्चर्यजनक डुबकी। अनौंठो र स्वादले भरिएको जुन कसैलाई पनि उदासीन छोड्ने छैन।
स्यान्डविचका लागि झींगा पास्ता
स्यान्डविचका लागि यस झिंगा पास्तासँग तपाईंको बच्चाहरू र जन्मदिन पार्टीहरू अझ बढी स्वादिष्ट र रमाईलो हुनेछन्।
थर्मोमिक्सको साथ तरल कारमेल तयार गर्नु त्यति सजिलो र सुरक्षित कहिल्यै छैन। कस्टर्डहरू र अन्य उत्कृष्ट व्यंजनहरू बनाउन यसको प्रयोग गर्नुहोस्।
क्रोइसेंट आमलेट आईबेरियन ह्याम र क्याम्बरबटले भरिएको थियो
आश्चर्यजनक क्रोइसेंट आमलेट आईबेरियन ह्याम र क्याम्बरबर्ट, सुपर रसिलो र स्वादिष्ट भरिएको। एक उत्तम स्टार्टर।
कारमेल कफी आइसक्रीम
के तपाइँ आइसक्रिम मन पराउनुहुन्छ र घरमा एउटा बनाउन चाहानुहुन्छ? हामी तपाईंलाई कसरी एउटा शानदार कारमेल कफी आइसक्रीम ... अपूरणीय !!
उल्टो चिनी (आइसक्रिमका लागि, केकहरू ...)
इन्भर्ट चिनी गोप्य घटक हो जुन तपाईं फ्लफी आटा र क्रीमयुक्त आइसक्रीम पाउनुहुनेछ। Thermomix® को साथ सजिलो र सरल।
टाइगर नट मिल्क हिला
प्रिजरवेटिवहरू बिना प्राकृतिक बाघ नट होरचटा तयार गर्नु धेरै सजिलो र सरल छ। बर्षको कुनै पनि समयका लागि स्वस्थ पेय।
क्रीम चीज फैलियो
यो क्रीम चीज फैलनु एकदम छिटो र बहुमुखी छ, तपाईंलाई यो मनपर्नेछ। यसलाई एपीरिटिफको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् वा तपाईंको डिश भर्नका लागि।
फल र डेअरीमा आधारित खुबानी स्मूदी तातो गर्मी दिउँसोको लागि एक राम्रो स्नैक हो।
टिहाइन मेयोनेजको साथ चिक्की र मोन्कफिस सलाद
स्वादिलो ​​र हल्का तरीकाले फलफूल खानका लागि स्वादिलो ​​चुना र मोनफिस सलाद, टिहाइन मेयोनेजको साथ।
के तपाईं वास्तविक लिम्बू पानीको मजा लिन चाहनुहुन्छ? यो धनी छ, स्फूर्तिदायी छ र तपाइँको Thermomix® को साथ यो २ सेकेन्डमा तयार हुनेछ।
एक ताजा क्यापुचिनो minutes मिनेटमा तयार छ? हो, तपाईंको Thermomix® को साथ सबै सम्भव छ। तातो आनन्द लिन को लागी एक धेरै सजिलो पेय।
स्ट्रबेरी, सुन्तला, चेरी र सोया दूध स्मूदी
स्ट्रबेरी, सुन्तला, चेरी र सोया दूध स्मूदी प्रयोग गर्ने मौका नभुल्नुहोस्। यो असहिष्णु मानिसहरूका लागि उपयुक्त पेय हो।
सुन्तला ग्रानिता र दहीको साथ स्ट्रबेरी
सुन्तला ग्रानिता र दहीको साथ यस स्ट्रबेरीको मिठाईको साथ तपाईसँग स्वादिलो, स्फूर्तिदायी र द्रुत मिठाई पाउनुहुनेछ।
यस धनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रिमको तयारी कहिले पनि सजिलो र छिटो भएको छैन। स्थिर स्ट्रोबेरी र Thermomix® को साथ बनेको।
यो स्वादिष्ट स्ट्रबेरी लस्सीको तयारीले तपाईंलाई तपाईंको Thermomix मार्फत २ मिनेट मात्र लिन सक्दछ। एक पेय को रूप मा स्फूर्तिदायक यो सजिलो छ।
स्ट्रबेरी कस्टर्ड क्लासिक मिठाईको नयाँ संस्करण एक मिठो बनावट र एक स्वादिष्ट स्ट्रबेरी आइसक्रीम स्वादको साथ एक नयाँ संस्करण हो।
यो साधारण चकलेट fondue को साथ तपाईं कुनै पनि समयमा एक विशेष र स्वादिष्ट नाश्ता वा मिठाई आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
दही सहित चकलेट मूस केक
दही चकलेट मौसे केक यति चाँडो, स्वादिलो, र बनाउन सजिलो छ, यसले तपाईंलाई र सबैलाई खुशी पार्नेछ।
चकलेट ज्वालामुखीले तपाईंलाई यसको स्वाद र सरलताको साथ प्रेममा पस्नेछ। तिनीहरूलाई कसरी बनाउने पत्ता लगाउनुहोस् कि तिनीहरू परिपूर्ण छन्।
नास्ताको लागि दलिया "गाजर केक" दलिया
ब्रेकफास्टको लागि ओटमील "गाजर केक" दलिया आदर्श छ किनकि यो सजीलै बनाईएको हुन्छ र तपाईंलाई बिहानको लागि उर्जा दिन्छ।
ग्रीक दही र किसमिस संग ताजा पालक
ग्रीक दही र किसमिस संग ताजा पालक। यो यत्ति छिटो र सजिलो छ कि तपाईंलाई थाहा पनि छैन कि तपाईंले यो गर्नुभयो भनेर।
प्रामाणिक Genoese पेस्टो
हामी प्रामाणिक जेनोइज पेस्टोको लागि एक नुस्खा तयार गर्दछौं र हामी तपाईंलाई सबै कुञ्जीहरू र तरिकाहरू बताउँछौं यसलाई इटालीबाट बनाइएको जस्तो बनाउन।
यो सिट्रस मेयोनेजको साथ तपाईं स्वाद र तपाईंको सबै व्यञ्जनहरूमा रमाइलो स्पर्श दिन सक्नुहुन्छ। Thermomix को साथ गर्न सजिलो।
गुलाबी मिर्चको साथ आम कम्पोटे
गुलाबी मिर्चको साथ यो स्वादिष्ट आम कम्पोटेक एकदम सरल छ कि तपाईं यसलाई थर्मोमिक्सको साथ १ 15 भन्दा कममा तयार पार्नुहुनेछ।
उपहारका लागि ब्लूबेरी र ओरेन्ज मफिन मिक्स
ब्लूबेरी र सुन्तलाको मफिनको यो मिक्सको साथ दिन, तपाईं मिनेट को एक मामला मा पेटू उपहार तयार गर्न सक्नुहुन्छ।
उत्तम अमेरिकी शैली कोलेस्ला सलाद
कोपिला कोबीज, स्याउ र गाजर कोलस्ला सलाद, एक मौसमी मेयोनेस सस लगाईएको। एक ताजा र लत सलाद।
प्याज र च्याउको चटनी
यो प्याज र मशरूम सॉस ग्रिल्ड मांसको साथ सेवा दिन उत्तम छ। Thermomix को साथ minutes मिनेटमा तयार छ।
क्रिसमस सलाद बाख्रा पनीर, आम र अखरोट भिनाग्रेटको साथ अनार
खजुरो र आश्चर्यजनक क्रिसमस सलाद बाख्रा पनीर, आम र अनार अखरोट भिनाग्रेट लगाईएको साथ।
झूठा माकुरा क्र्याब मूस
यो नक्कली स्पाइडर क्र्याब मूस बनाउन जति चाँडो छ सजिलो छ। एक स्वादिष्ट इम्प्रिप्टु खाजाको लागि उत्तम समाधान।
टोस्टेड यक नौगट फ्लान
यो स्वादिष्ट टोस्टेड योक नौगट फ्लानको साथ तपाईंसँग एक स्वादिष्ट मिठाई र प्रयोगको लागि एक नुस्खा हुनेछ।
हामी तपाईंलाई घरबैंचा नरिवल नउगट कसरी बनाउने भन्ने बारे जानकारी दिन्छौं। यो Thermomix को साथ गर्न को लागी छिटो र सजिलो पनि छ।
हेजलनट्सको साथ चकलेट नौगट
हेजलनट्सको साथ चकलेट नौगट यति धनी छ र यो यत्तिको छिटो र सजिलो छ कि थर्मोमिक्सको साथ तयार छ कि यसले तपाईंलाई चकित तुल्याउँछ।
ढु the्गाको नौगट सबै क्रिष्टमसको सबैभन्दा क्लासिक हो। अब हामी सजिलैसँग हाम्रो थर्मोमिक्सको साथ घरमा यो गर्न सक्दछौं।
क्रन्ची चकलेट नौगट
Thermomix को साथ बनेको यस crunchy chocolate Nougat बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि वास्तविक क्रिसमस उपाध्यक्ष हो।
तातो चकलेट कुनै पनि अवसरको लागि आदर्श हो। साथै Thermomix को साथ यो गर्न को लागी यती सरल छ कि यो अल्छी छैन।
केसर झींगाको यो नुस्खाको साथ तपाईंसँग तपाईंको पाहुनाहरूलाई चकित पार्न एक स्वादिष्ट र मौलिक एपेटाइजर हुनेछ।
यस चकलेट इनगटको साथ तपाईं क्रिसमसको १००% रमाउनुहुनेछ। यसको चिल्लो बनावट र गन्धको स्वादले प्रत्येक काटलाई अविस्मरणीय बनाउँदछ।
आधारभूत विधि: रातो मसूरको पीठो
तपाईंको थर्मोमिक्सको साथ तपाईंको आफ्नै रातो मसूरको पीठो तयार पार्नु त्यति सजिलो भएको छैन, यसको गुणहरूको आनन्द लिन मिनेटमा नै तयार छ।
पपकर्नको स्वादले चूना र मुक्काको स्पर्श
चूना स्वाद र कालो मिर्च को एक सूक्ष्म स्पर्श संग पपकोर्न र अधिक हिम्मत को लागि, लालचिन वा मिर्च को एक स्पर्श। लत!
सुन्तला को रस
के तपाइँ थर्मोमिक्सको साथ एक स्फूर्तिदायी सुन्तलाको जुस बनाउन चाहनुहुन्छ? यस नुस्खामा तपाईले देख्नुहुनेछ कि सम्पूर्ण परिवारको लागि यो पेय बनाउन कत्ति सजिलो छ।
Thermomix को साथ बनेको यो tiramisu यति सजिलो छ कि तपाईं यसलाई कुनै बेलुका वा विशेष उत्सवको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
दूध, कोको, हेजलनट र चिनी क्रीम
थर्मोमिक्सको साथ बनेको यो दूध, कोको, हेजलट र चिनी क्रीम कुकीजमा फैलाउन वा स्पन्ज केक भर्नका लागि उत्तम छ।
लसुन - अजमोद मेयोनेज
लसुन र अजमोदको स्वादको साथ स्वादिष्ट मेयोनेस सॉस। सजिलो र छिटो र हाम्रो माछा व्यंजन संग संग उत्तम।
शतावरी र कोकलहरूको कोल्ड क्रीम
शतावरी र ककल्सको यो चिसो क्रीमको साथ तपाईं आनन्द लिनुहुनेछ, केही मिनेटमा, एक स्वादिष्ट, सरल र धेरै मूल पहिलो पाठ्यक्रम।
जैतून र बदाम पेस्टाको साथ ग्लुटन-मुक्त एक्सप्रेस पास्ता
तपाईं १ recipe मिनेटमा थर्मोमिक्सको साथ सजिलैसँग जैतुन र बदाम पेस्तोको साथ ग्लुटन-मुक्त एक्सप्रेस पास्ताका लागि यो नुस्खा तयार गर्न सक्नुहुन्छ।
यस गर्मी बनाउन quick द्रुत र सजिलो डिनर
रातीको खानाको लागि घरमा तयारी गर्न नौ व्यंजनहरु को एक शानदार चयन। तिनीहरू सजिलो र धेरै स्वस्थ छन् र तिनीहरू १ 15 मिनेट भन्दा कममा तयारी गर्दछन्।
मिस्रको ग्यास्ट्रोनोमीको विशिष्ट पकवान, पकाइएको सिमीबाट बनेको र प्याज, जीरा, धनिया, अजमोद र निम्बूको साथ गार्निश। स्वादिष्ट!
मूल विधि: aioli
आइओली, आइओली वा एजोसाइट भूमध्यसागरीय खानाको परम्परागत चटनी हो, लसुन, तेलमा आधारित हुन्छ र कम्तिमा भ्यालेन्सियन संस्करणमा अण्डाको जलोमा हुन्छ।
पूरा बदाम माखन
थर्मोमिक्सको साथ बनाउनको लागि पूरै बदाम माखन त्यति नै सरल छ। धेरै तयारीहरूमा यसको स्वादको आनन्द लिनुहोस्।
दही र गुलाब-सुगन्धित कोलिसको साथ स्ट्रबेरी
दही र गुलाब-सुगन्धित कूलिससँग दही र थर्मोमिक्ससँग बनेको स्ट्रॉबेरीहरूको लागि यो मूल विधि सरल र सरल छ किनकि यो आश्चर्यजनक छ।
सुपर छिटो र सुपर स्वस्थ केरा आइसक्रीम
सुपर छिटो र सुपर स्वस्थ केरा आइसक्रीम। यो यति अभिव्यक्त हुन्छ कि हामीसँग यो २ मिनेट भन्दा कममा हुनेछ। र यति स्वास्थ्यकर छ कि यसमा केवल केरा छ।
तपाईंको Thermomix को साथ यो सरल Dalgona कफि रेसिपी तयार गर्नु सरल छ। केवल ingredients सामग्री र minutes मिनेटमा तपाईं यसको स्वादको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ।
बदाम बटर र चकलेट
थर्मोमिक्सको साथ घरमा यो स्वादिष्ट बदाम बटर र चकलेट तयार गर्नु जति छिटो छिटो छ। टोस्टमा प्रसारको लागि आदर्श।
हल्का ट्यूना र anchovy pate
तपाईंको थर्मोमिक्सको साथ तपाईं २ मिनेटमा हल्का टुना र एन्कोभी पेटी तयार गर्न सक्नुहुनेछ र केवल cal० क्यालोरीको साथ स्वादिष्ट बाइटको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
क्रीमी मशरूम लसुन सॉस
यस क्रीमयुक्त लसुन मशरूम सॉसको साथ तपाईंको पास्ता व्यंजनहरू रूपान्तरण गर्नुहोस्। Thermomix को साथ गर्न सजिलो, सरल र छिटो।
भोल्यू-वा-भेन्टहरू जैतून पाटेको साथमा शीर्ष झूटो स्पाइडर क्र्याब मूस भरिएको
नक्कली स्पाइडर कराब मउसेले भरिएको अविश्वसनीय भोल-अउ-भेंट्स जैतुन पाटे, क्रिसमसको समयमा टेबल सजाउनको लागि उत्तम।
कालो अण्डाको साथ सलामी मूस टार्टलेट्स
क्रीम चीज र कता अण्डाको साथ मिनी सलामी मूस टार्टलेटहरू, यस क्रिसमसलाई ककटेल-प्रकार एपेटाइजरको रूपमा तयार गर्नका लागि उत्तम छ।
भेगन र चिनी रहित चकलेट फ्लान
यो शाकाहारी र चिनी रहित चकलेट फ्लान धेरै असहिष्णुताहरूको लागि उपयुक्त मिठाई हो, Thermomix को साथ बनाउन सजिलो र छिटो।
चिनी रहित तरल कारमेल
चिनी रहित तरल कारमेल र तपाईंको Thermomix को लागि यो नुस्खाको साथ तपाईं केहि मिनेटमा, तपाईंको घरको पोडिंगहरू वा वफलमा सबै स्वाद लिन सक्नुहुन्छ।
थर्मोमिक्सको साथ घरमा सलाद तयार गर्नु तपाईंले सोचेको भन्दा सजिलो छ। र, यदि होईन भने, के हेर्नुहोस् ...
NESCAFÉ® Frappé केरा र कुकीज
नेस्काफ्रे फ्रेप क्याला र कुकीज, यो गर्मी कुनै पनि दिउँसो मीठो बनाउनको लागि एक उत्तम विधि, भनिला आइसक्रीम र एक कुकी र केरा टपिंगको साथ।
रंगीन गुलाबी गुनगुना, बीट र छोलाको साथ बनेको। एक फरक hummus, धेरै विशेष, स्वादिष्ट र नाजुक।
बीन र फलेको टमाटर गुनगुना
यस सेम र सुकेका टमाटरको ह्युमससँग तपाईंसँग फलफूलमा आधारित खाजा हुनेछ, तपाईंको थर्मोमिक्सको साथ छिटो र सजिलो बनाउन।
खरबूजा, अजवाइन र पालक स्मूदी, सुपर डिटोक्स
स्वादिष्ट खरबूजा, अजवाइन र पालक स्मूदी, पोषक र भिटामिनहरूको एक पम्प, स्वस्थ र क्यालोरी कम छ। उत्तम खाजा।
एवोकैडो र ताहिनी डुबकी
आश्चर्यजनक एवोकैडो र ताहिनी डुबकी। एभोकैडो र ताहिनीको क्रीमनेसले यसलाई एक अद्वितीय पकवान बनाउँदछ। Minutes मिनेट भन्दा कममा तयार
स्यान्डविच र स्नैक्सको लागि ब्लूबेरी मेयोनेस
यो ब्लूबेरी मेयोनेजको साथ तपाईं तपाईंको स्यान्डविच र स्यान्डविचमा स्वाद र रंग थप्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको Thermomix को साथ गर्न को लागी धेरै सजिलो।
खाजाको लागि बहु-फल दूध
सानाको खाजा पूरा गर्न स्वादिष्ट मल्टिफ्रुट दुध। यो एक सरल, सस्तो, छिटो र धेरै धनी विकल्प हो।
गाजर Labneh फैलियो
यो Labneh र गाजर प्रसार संग तपाईं अनौपचारिक डिनर को लागी एक सजिलो र ताजा डुबकी पाउनुहुनेछ वा ...
Gulas g मिर्च, अदुवा र धनिया संग प्राच्य शैली झींगा संग
क्लासिक लसुन गुलहरुको ओरिएन्टल संस्करण: मिर्च, अदुवा र धनिया संग ओरिएन्टल शैली झींगा संग गुलास। इन्द्रियहरूका लागि रमाइलो!
स्यान्डविज सॉसेज मूसले भरिएको छ
ससेज मूसले भरिएको स्यान्डविच, हाम्रो रोटी भर्न र हाम्रो पाहुनाहरूलाई विभिन्न स्वादका साथ चकित पार्न खुशी छ।
नरम आहार को लागी क्षारीय नींबू पानी
नरम आहारको लागि यस क्षारीय लिम्बू पानीको साथ तपाईं प्राकृतिक रूपले हाइड्रेटेड रहन सक्नुहुन्छ, छिटो र सजिलो तपाईंको Thermomix को साथ।
भुनी मिर्चको साथ गुलाबी चटनी
भुनी मिर्चको टचको साथ उत्तम गुलाबी चटनी। झींगा, हरियो सलाद, समुद्री खाना ककटेल र स्यान्डविचको साथ एक उत्तम आधारभूत विधि।
स्ट्रिम र जामको साथ क्रीम चीजको साना गिलास
स्ट्रॉबेरी र जामको साथ क्रीम चीजको यी गिलासहरूसँग तपाईं थर्मोमिक्सको साथ १ मिनेटमा फल र डेअरीमा आधारित मिठाई पाउनुहुनेछ।
चकलेट जग्गाको साथ क्रीमयुक्त आडू
स्वादिष्ट एक्सप्रेस डेजर्ट जुन हामी केवल minutes मिनेटमा तयार गर्दछौं: चकलेट जग्गाको साथ क्रीमी पिच। शून्य कठिनाई।
स्वादिष्ट र क्रीमयुक्त पेस्तो ह्यूमस, रंगीन र स्वादिष्ट, साथीहरूसँग डुब्नका लागि आदर्श र नयाँ स्वादको साथ आश्चर्यचकित।
भेगन नरिवल फ्लान
यो शाकाहारी नरिवल फ्ल्यानको साथ तपाईले एक सजीलो, सरल, हल्का मिठाईमा शाकाहारीहरू र ल्याक्टोज र अण्डामुक्त आहारहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ।
Oreo तातो चकलेट
यस वर्ष Oreo तातो चकलेट पक्कै पनि सबैभन्दा मीठा उपचार हुनेछ। Thermomix को साथ बनाउने एक सरल नुस्खाले तपाइँको पार्टनरलाई यसको मायामा पस्नेछ।
पनीर, पेप्रिका र तेलको साथ अल्मोग्रोट गोमेरो वा क्यानारियन पेटे। यो बनाउन धेरै नै सरल छ र एक खाजाको रूपमा राख्नु यो उत्तम भन्दा बढी हो।
भोल्यू भेंट धूम्रपान गरिएको सामन मूस, बाख्रा पनीर र अखरोटले भरिएको
भोल्यू au- भेन्ट धूम्रपान साल्मन मूस, बाख्रा पनीर र अखरोट को साथ भरिएको। एक नुस्खा सजिलो र छिटो। Minutes मिनेटमा तयार !!
Dulce de leche कस्टर्ड
यी dulce de leche कस्टर्डले मिठो स्वादहरू पागल मन पराउनेहरूलाई ड्राइभ गर्ने छन्। तिनीहरू बनाउन को लागी सजीलो छन्।
झींगा र अनानास मूसले भरिएको भोल्यू भेंट
झींगा र अनानास मूस, नरम, क्रीमयुक्त, नाजुक र धेरै सजिलोले भरिएको स्वादिष्ट भोल्यू भेंट! यस क्रिसमस को लागी एक स्टार्टर १०
एन्कोभी रोटीको साथ नमकीन इडियाजाबल पनीर कस्टर्ड
एन्कोभी पेस्टको साथ टोस्टहरूमा स्वादिष्ट र मलाईदार नुनिलो इडियाजबल पनीर कस्टर्ड। क्रिसमस को लागी एक उत्तम स्टार्टर।
नीबू भिनाग्रेटको साथ घुमाउरो र पालक सलाद
पालक र निम्बू भिनाग्रेटको साथ रंगीन घुमाउरो पास्ता सलाद। एक स्टार्टर वा डिनर को रूप मा आदर्श, काम गर्न वा पिकनिक मा लिनुहोस्!
पनीर सॉस र मेयोनेजको साथ मिश्रित टेंडर स्प्रउट सलाद
जैतूनहरू, मकै, टुना र केकडा स्टिकको साथ मिश्रित कोमल अंकुर सलाद एक उत्तम चीज र मेयोनेस सॉसको साथ सेवा
आधारभूत नुस्खा: केन्द्रित सुख्खा टमाटर प्यूरी
यस केन्द्रित सुकेको टमाटर प्यूरीको साथ तपाईं आफ्नो बोलोनीज र टमाटर सॉसको स्वाद बढाउन सक्नुहुनेछ। Thermomix को साथ बनाउन को लागी एक सरल विधि।
अखरोट र च्याउ प्याटे
यो अखरोट र मशरूम पेटीको साथ तपाईं शरद ofतु भन्दा अघि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र थर्मोमिक्ससँग बनाउनको लागि सजिलो शाकाहारी एपेटाइजरको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं प्रिजर्भेटिभ वा रंग बिना प्राकृतिक जुसहरू मनपराउँनुहुन्छ भने, यो मल्टिभिटमिन पेय तपाईंलाई मोहित पार्दैछ। यो ताजा फलले बनेको छ र यो धेरै सरल छ। यस मल्टीभिटमिन पेयको साथ आफैलाई स्फूर्ति दिनुहोस् र यस गर्मीमा स्वस्थ र सुन्दर छाला देखाउनुहोस्। सजिलो, घरेलु र थर्मोमिक्सको साथ १ मिनेटमा तयार।
टमाटर र दालचिनी संग छोला
स्वादिष्ट पकाइएको छिया प्याजको साथ कटाई र फ्राइड टमाटर सॉस र जीरा र दालचिनी को एक स्पर्श संग। एक स्टार्टर को रूप मा स्वादिष्ट!
अंगूर भेनिला आइसक्रीम धूम्रपान
फ्रिज भएको, क्रीमी स्मूदीको रूपमा अंगुर र भेनिलाको उत्कृष्ट संयोजन, फलफूल र केरा जस्ता अन्य फलहरूसँग, जसले यसलाई एक अद्वितीय चिकनी बनाउँदछ।
स्यान्डविचका लागि सलामी पास्ता
स्यान्डविचका लागि यो सलामी पेस्टको साथ तपाईं एक मिनेटमा स्वादिष्ट स्नैक्स तयार गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईंको जन्मदिन भोजहरूमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्रीम प्रकार हो। स्यान्डविचका लागि यस सलामी पेस्टको साथ तपाईं स्वादिष्ट स्नैक्सको विकास गर्न सक्नुहुनेछ वा यसलाई तपाईंको जन्मदिन भोजहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। बनाउन र फैलाउन सजिलो।
केला र भेनिला मिल्कशेक
हामी स्वादिष्ट फ्रिज शेकहरू, स्वादिष्टसँग गर्मीलाई हराउन जारी राख्छौं! आज हामी तपाईंको लागि एक प्रभावशाली भेनिला र केरा स्मूदी ल्याउँदछौं जुन स्वादिष्ट अमेरिकी शैलीको केरा स्मूदी, भनिला आइसक्रीम, दूध र केही थोपा नीबूको साथ बनेको छ। स्फूर्तिदायी, स्वादिष्ट, पौष्टिक र स्वादिष्ट।
दही, कीवी र आम कप
दही, किवी र आमको यी गिलासहरूले समान सामग्रीलाई सधैँ फरक फरक हावा दिन काम गर्नेछ। Thermomix को साथ बनाउन को लागी एक सजिलो नुस्खा।
हरियो देवी ड्रेसिंग र crunchy हेम संग बुड
हरी देवीको पोशाक र क्रन्ची ह्यामको साथ यी कलहरूसँग तपाईं minutes मिनेटमा छिटो डिनर पाउनुहुनेछ तपाईंको धेरै छुट्टीको लागि।
अण्डा सूरीमी, जैतून र टुनाका सामानहरू भरिन्छ
अण्डाहरूको ताजा, छिटो र सरल विधि Thermomix संग गर्मीको मजा लिन सुरिमी, जैतून र टुना भरिएको।
अचार विनाग्रेटको साथ छोसेको सलाद
यस अदुवा भिनाग्रेटको साथ छोसेको सलादको साथ, ग्रीष्म leतुमा फलहरू खान सजिलो हुनेछ। एक ताजा नुस्खा Thermomix को साथ बनाईएको छ र यातायात को लागी धेरै सजिलो।
पेटिट सुइस शेक
क्रीमयुक्त र स्वादिष्ट पेटिट सुइस स्ट्रबेरी, क्रीम र केना हिलाउनुहोस्। सम्पूर्ण परिवार संग खाजा खाने को लागी उत्तम छ। Minutes मिनेट भन्दा कममा तयार
चामलको सलाद स्याउ र नट संग
स्याउ र नटको साथ यस चामल सलादको साथ तपाईं एक पौष्टिक पकवान हुनेछ, Thermomix साथ छिटो। एक मूल प्रस्ताव र काम गर्नका लागि सजिलो।
हल्का स्ट्रबेरी फोम
लाइट स्ट्रबेरी फोम उत्तम मिठाई हो; स्वादिष्ट स्वाद, आश्चर्यजनक प्रकाश बनावट, सरल, सस्तो र Thermomix को साथ बनाउनको लागि धेरै छिटो।
तरकारी र माछाको साथ नूडल्स
तरकारीहरू र तेरियाकी स्वादयुक्त माछा fillet को साथ फसल नूडल्स। चाँडै तयारी गर्न आदर्श।
Thermomix को साथ बनेको द्रुत र क्रीमयुक्त हिला ताकि तपाईं मच्चा चियाको सबै राम्रा र अनानास र नरिवल पानीको स्वादिष्ट स्वाद लिन सक्नुहुनेछ।
स्ट्रबेरी तरबूजको कुकीहरू साथ स्मूदी
खरबूजा, स्ट्रबेरी र कुकीज प्रकारको मारियाको उत्कृष्ट स्मूदी। बिहानको खाजा वा युवा र वृद्धको लागि खाजाको रूपमा आदर्श, वा दिनको कुनै पनि समयमा खाजाको रूपमा।
चीज र चिली कोन कार्नेको साथ नाचोस
चीज र चिली कोन कार्नेको साथ उत्तम र दर्शनीय नाचोस। एक सप्ताहन्तमा साथीहरू वा परिवारसँग खाजा खाजाको लागि उत्तम। घरेलु र स्वादिष्ट, यसले तपाईंलाई तयार पार्न १० मिनेट मात्र लिन्छ।
कोच र पालक संग Chickpea क्रीम चश्मा
कोड र पालकको साथ यस सानो गिलास चाना क्रीमको साथ तपाईंसँग एक सबै भन्दा क्लासिक ईस्टर रेसिपीमा आधारित मौलिक एपेटाइजर हुनेछ।
«pringá» बाट अन्डालुसियन मोन्टाडिटो
रसिलो र स्वादिष्ट Andalusian शैली मन्टाटाइटोस मफिन रोटीको साथ, "pringá" भरिएको। एपीरिटिफको रूपमा न्यानो पिउन स्वादिष्ट हुन्छ। र स्ट्युको बाँकी खर्च खर्च गर्ने उत्तम तरिका।
एक सक्कली र फरक पेय: मच्चा लाट्टे, दूध जापानी म्याच्चा ग्रीन चियाको साथ स्वाद। तातो वा चिसो पेयको रूपमा आदर्श। मीठो, स्वादिष्ट र पूर्ण-शरीर।
फसल क्रीम sautéed shiitake मशरूम संग
Thermomix को साथ बनेको sautéed shiitake मशरूमको साथ यो क्रीम प्रयोगको स्वास्थ्य, पूर्ण र प्रकाश छ। यसले तपाईंलाई भान्साकोठामा पैसा बचाउन पनि मद्दत गर्दछ।
मिनी एक्सप्रेस क्र्याब स्यान्डविच
क्र्याब, सलाद र मेयोनेजको साथ मिनी एक्सप्रेस स्यान्डविच जुन तपाईं केवल minutes मिनेटमा तयार गर्नुहुनेछ। तत्काल भ्रमणका लागि उत्तम !!
फसल बीन्स र तरकारीका साथ छोला साटा
सिमी र तरकारीहरूसहित छिटो र सजिलो चना साउ। Vegg डिश Thermomix को साथ बनेको जब तपाईं विचार समाप्त भयो।
घरेलु chorizo ​​काली मिर्च पास्ता
यो घर बनाइएको chorizo ​​मिर्च पेस्ट Thermomix को साथ छिटो र सजिलो छ। र यसले हामीलाई पारंपरिक व्यञ्जनहरू पूर्ण स्वाद तयार गर्न अनुमति दिन्छ।
यो स्थायी टॉनिक र तपाइँको थर्मोमिक्सको साथ तपाइँ तपाइँ तपाइँको शरीरलाई शुद्ध गर्न सक्नुहुन्छ र ज्यादतीहरूलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंलाई थप स्वास्थ्य दिनको लागि चार विकल्पहरू देखाउँदछौं।
स्ट्रबेरी केला स्मूथी
स्ट्रबेरी र केरा स्मूदी स्वादिष्ट छ र फलको सबै राम्रो प्रदान गर्दछ। यो छिटो र स्फूर्तिदायी छ ... यसलाई नबिर्सनुहोस्! हामी तपाईंलाई यसको गुणहरू पनि बताउँछौं र यदि यसले वजन कम गर्न वा तौल घटाउन कार्य गर्दछ।
अनानास र जोश फल फोम
अनानास र अनुकम्पा फल फोम एक हल्का, चिल्लो र स्फूर्तिदायी मिठाई हो र यो एक विशाल रात्रिभोजको अन्त्यको रूपमा सेवा गर्दछ। Thermomix को साथ minutes मिनेटमा तयार छ।
क्रीम कार्बानरा ससको साथ Gnocchi
धेरै सजिलो र छिटो कार्बोनेरा स्टाइल gnocchi, क्रीम र बेकन सॉसको साथ। एक एक्सप्रेस লাঞ্চ वा डिनर को लागी एक पूर्ण नुस्खा
ब्लूबेरी लेमन बलहरू
यी ब्लूबेरी र निम्बू बलहरूको साथ एक स्वस्थ, स्वस्थ र पौष्टिक खाजाको मजा लिनुहोस्। Thermomix को साथ गर्न सजिलो।
क्रीमयुक्त zucchini को साथ भोल औ भेन्टहरू
क्रिस्मसका लागि उत्तम स्टार्टर: भोल्यु भेंट भाँडामा क्रीमी zucchini भरिएको, बुफे शैली शैलीको खानाको लागि उत्तम। नरम र नाजुक
सुन्तला र ब्लूबेरी स्मूदी
यस सुन्तला र नीलोबेरी स्मूदीको साथ तपाईं र color, स्वाद र पोषक तत्वहरूले भरिएको पेयको आनन्द लिनुहुनेछ जसले हामीलाई स्वस्थ आहार लिन मद्दत गर्दछ।
मन्डारिन र अदुवाको साथ छोला गुनगुना
म्यान्डारिन र अदुवाको स्पर्शले विदेशी र स्वादिष्ट छोला हुम्मुसले यसलाई अद्वितीय बनाउँछ। एक स्टार्टर को रूप मा आदर्श र toasted रोटी संग खाजा।
ब्रोकोली र हल्दी मेयोनेजको साथ मसूरको सलाद
हल्दी मेयोनेजको साथ ब्रोकोली स्प्रिगसँग मसूरको सलाद। एक स्टार्टर वा डिनरको मुख्य पकवानको रूपमा आईडिया।
Ol जैतुनको ट्यापेनेड
विशेष बनावटको साथ स्वादिष्ट ol जैतुन टेपनाड। एक एपीरिटिफ जुन तपाइँ थर्मोमिक्सको साथ छिटो र सजिलोसँग अग्रिम बनाउन सक्नुहुन्छ।
प्रसिद्ध Pintxo Donosti नुस्खा, क्र्याब स्टिकहरू र मेयोनेजको साथ बनाईएको। Minutes मिनेटमा खाजा बनाउन उत्तम।
कालो लसुन मेयोनेस
कालो लसुनबाट बनेको शानदार मेयोनेस, माछा, मासु र तरकारीहरू सँगसँगै आउन योग्य। गर्न सजिलो।
घरेलु तरकारी ध्यान केन्द्रित पाउडर
घर बनाइएको पाउडर तरकारी ध्यान केन्द्रित स्वस्थ, धेरै सजिलो र छिटो बनाउनको लागि छ र साथै संरक्षक वा कृत्रिम रंगहरू समावेश गर्दैन।
दही कोल्ड क्रीम, काकडी र अंगूर
दही, चिसो र अंगूर को कोल्ड क्रीम गर्मी को लागी सही छ। यो ताजा छ, Thermomix को साथ गर्न सजिलो र छिटो छ कि3भन्दा कम मा यो तयार हुनेछ।
मर्कल र सिपीहरूको साथ समुद्री pate
केवल १ मिनेटमा तपाईंसँग Thermomix को साथ बनेको Cuckles र Mussel को स्वादिष्ट समुद्री खाना प्याट हुनेछ र यसको साथ तपाईं एक विशेषज्ञ जस्तो हुनेछ।
ताजा गाजर gazpacho, गर्मी को ताप को सामना गर्न को एक स्टार्टर को रूप मा आदर्श। तयार गर्न सजिलो र छिटो। कम क्यालोरी आहारहरूको लागि आदर्श।
मिसो क्रीम र ताहिनीको साथ धूम्रपान सामन टोस्टहरू
मिसो क्रीम र ताहिनीको साथ मूल स्मोक्ड सामन टोस्टको साथ बनावटको स्वाद र कन्ट्रास्टको मजा लिनुहोस्। एक द्रुत र धेरै साधारण पकवान।
कालो वन सफाई
सरल र स्वादिष्ट सेल्भा नेग्रा प्रसिद्ध चकलेट र चेरी केकको सबै स्वादको साथ हिलाउनुहोस्। उत्तम गर्मी खाजाको लागि चिसो सर्द गर्नुहोस्।
झींगा र सेतो माछाको साथ नूडल पुलाव
झींगा र सेतो माछाको टुक्राको साथ राम्रा नूडल्सको स्वादिष्ट क्यासरोल। तयार गर्न धेरै सजिलो र छिटो। १ 15 मिनेटमा यो तयार हुनेछ।
Tomatitos anchovies साथ भरिएको
यति सलाद संग कंटाई? एन्कोभीले भरिएका केही टमाटरहरू कसरी तयार गर्ने भनेर हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं। सजिलो, छिटो र रमाईलो।
दही र पेपरमिन्ट हमस
हामी क्लासिक ह्युमसको संस्करण सिर्जना गर्दछौं जसमा हामी ग्रीक दहीको क्रीमी स्पर्श र पेपरमिन्टको साथ एक स्फूर्तिदायी स्पर्श थियौं।
स्वादिष्ट अनानास दही क्रीम जुन तपाईं केक, टोस्ट वा कप केकहरू भर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। Thermomix को साथ गर्न को लागी सुपर सजिलो र छिटो।
सुन्तला, गाजर र अदुवा स्मूदी
१ मिनेटमा हड्डी जुन तपाईंलाई शक्ति दिउँसो बिहानको सामना गर्न सबै उर्जा दिन्छ। र ताजा र विदेशी स्पर्श संग एक स्वादिष्ट स्वाद।
जापानी काकडी सलाद
जापानी ड्रेसिंगको साथ काकडी सलाद, चामल, पास्ता वा माछाको अभिव्यक्ति साथको रूपमा आदर्श। १० मिनेट भन्दा कममा तयार!
चेरी, स्ट्रबेरी र नाशपातीको Antioxidant रस
चेरी, स्ट्रबेरी र नाशपातीको यस एन्टिऑक्सिडन्ट रस कसरी तयार गर्ने सिक्नुहोस्। भिटामिनहरूले भरिपूर्ण एक पेय पदार्थ जसले हामीलाई फ्रि रेडिकलहरूसँग लड्न मद्दत गर्दछ।
Petit suisse प्राकृतिक
तपाइँका बच्चाहरूलाई क्लासिक प्राकृतिक पेटिट सुसको सबै स्वादको मजा लिन दिनुहोस्। अब घरमा बनेको छ, थर्मोमिक्सको साथ कम १० मिनेटमा।
केरा, नाशपाती र सुन्तलाको बच्चा दलिया
यो केरा, नाशपाती र सुन्तलाको बच्चा पोर्रिज एक उत्तम, स्वस्थ, छिटो र सजिलो खाजा Thermomix संग तयार गर्न को लागी हो
अंगूर र स्याउको जुस
सुन्तला र स्फूर्तिदायी रस सुन्तला र स्याउको साथ अंगूरबाट बनेको। हाम्रो शरीरको लागि भिटामिन र पोषक तत्वहरूको एक पम्प
१ मिनेटमा स्वस्थ बिहानको खाजा
केरा र ओटमीलको साथ नास्ताको लागि स्वस्थ स्मूदी व्यक्त गर्नुहोस्, जब हामीसँग बिहानको खाजामा समय छैन। २ मिनेट भन्दा कममा यो तयार हुनेछ।
ब्रोकली र स्ट्रबेरी स्मूथी
नाश्ता वा मध्य-बिहान वा मध्य दिउँसोको लागि आदर्श, ब्रोकोली र स्ट्रबेरीको साथ बनेको उत्कृष्ट र पौष्टिक स्मूदी। स्वास्थ्य को एक स्रोत।
Dukkah एक स्वादिष्ट मसलादार मिश्रण हो जुन हामी ग्रील्ड तरकारीहरू, पास्ता, ह्युमस वा केही अविश्वसनीय टोस्टहरू स्वादको लागि प्रयोग गर्न सक्छौं।
सेनिटाइज्ड मेयोनेस सॉस, पास्चराइजेशनको नजिकको खाना पकाउने प्रक्रियाको अधीनमा, जसले साल्मोनेलोसिसद्वारा संक्रमणको जोखिम कम गर्दछ।
नर्वेली स्मोक्ड सस
नर्डिक ग्यास्ट्रोनमीको एक क्लासिक: ट्राउट वा साल्मन जस्ता धूम्रपान गरिएको माछाको साथमा राई र डिल सॉस।
ट्रिक: १ 15 सेकेन्डमा रूसी सलादको सामग्री कसरी काट्ने
थर्मोमिक्स ट्रिक: कसरी १ 15 सेकेन्डमा रूसी सलादको तरकारीहरू काट्ने। जब हामीसँग समय छोटोको लागि उत्तम समाधान।
Quinoa Béchamel एक स्वस्थ विकल्प हो, गहुँ बिना र गाईको दुध बिना, Thermomix को साथ द्रुत बनाउनको लागि र तपाइँ क्रोकेट र लासाग्नामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
नो-बेक चकलेट केक
नो-बेक चकलेट केक भ्यालेन्टाइन डेको लागि उत्तम छ। सरल, Thermomix को साथ गर्न को लागी द्रुत र coeliacs को लागी उपयुक्त।
आम-ट्याang्गो रस एक स्वादिष्ट फल पेय हो जुन हामीलाई वर्षको कुनै पनि समयमा हाइड्रेट राख्दछ। यसलाई Thermomix को साथ द्रुत रूपमा तयार गर्नुहोस्
थर्मोमिक्सको साथ कसरी डेशि ब्रथ बनाउने सिक्नुहोस्। जापानी खानाको परम्परागत विधि र जापानी पकवानको एक भीड को आधार।
सुन्तला र अनार अमृत
मौसमी फलका सबै फाइबर र भिटामिनहरूको साथ पूर्ण संत्रा र अनारको रस। ब्रेकफास्ट, खाजाको लागि आदर्श।
चिया र अदुवाको साथ बनको स्मूदी
हाम्रो शरीर खनिज र भिटामिनको साथ रिचार्ज गर्न एक ऊर्जा पम्प। नाजुक पेट, क्याल्सियमको कमी वा फ्लू र जाडोको लागि आदर्श।
चकलेट संग Tapenade
चकलेट टेपेनेडका लागि यो नुस्खाको साथ तपाईं यस क्रिसमसमा आफ्ना पाहुनाहरूलाई चकित पार्नुहुनेछ, एक एपिटिजर जुन केहि मिनेटमा बनाउन सजिलो हुन्छ।
क्रिस्पी नउरीको साथ धूम्रपान गरिएको सालमन टार्टारे
थोरै स्मोक्ड सामनको फाइदा उठाउँदै हामीले क्रन्ची नोरी समुद्री शैवालसहित यो स्वादिष्ट साल्मन टार्टारे सिर्जना ग party्यौं, पार्टी भोजका लागि आदर्श!
कालो लसुन हमस, ट्रफल तेल र निम्बू-चूना मोतीहरूको साथ
यी क्रिसमस पार्टीहरूलाई आश्चर्यचकित गर्न अति उत्तम स्टार्टर: कालो लसुन, ट्रफल तेल र निम्बू-चूना मोतीको साथ छोसेको गुनगुना।
गाढा चकलेट र कफी मूस
यो गाढा चकलेट र कफी मूस वयस्कहरूको लागि आरक्षित थोरै उपचार हो। गहन स्वादको साथ नरम बनावट, के तपाईं हिम्मत गर्नुहुन्छ?
घरमा बनाइएको च्याउ नुन
थर्मोमिक्सको साथ घरेलु मशरूम नुनको तयारी धेरै सरल छ। केहि मिनेट मा यो प्रयोग गर्न को लागी तयार हुनेछ र हाम्रो व्यंजनहरु लाई एक विशेष स्पर्श दिन्छ।
चिसोको लागी गाजर र अंगूरको रस
भिटामिन सी र एन्टिआक्सिडन्ट र पाचन गुणहरूले भरिएको जुकामको लक्षणसँग लड्न एउटा शक्तिशाली जुस।